MIR inoenderera se graphic server | Linux Vakapindwa muropa
MIR inoenderera se graphical server
Kuvharwa kwemapurojekiti akasiyana-siyana eUbuntu pasina mubvunzo anga ari mashoko makuru eGnu / Linux nyika. Asi, zvinoita sekunge ese mapurojekiti akasiiwa akachekwa. Iyo MIR graphical server iri kuenda kumberi uye ichave iripo muUbuntu 17.10, inotevera inotevera yakagadzika vhezheni yeUbuntu.
Munguva pfupi yapfuura MIR 1.0 yakaburitswa, yekutanga yakagadzika vhezheni yeiyi graphical server iyo isingogadzirise chete mabugs akaunzwa mushanduro dzakapfuura asi zvakare anowirirana nemamwe maseva emifananidzo akadai seWayland kana X.Org.
Kwete chete yekutanga vhezheni yeMIR yakashamisika, asi hunhu hwayo hukuru hwakashamisawo: kuiswa kwekutaurirana neWayland graphical server. Kubata maziso kwete chete kune tekinoroji yakashandiswa asi zvakare yekutaurirana nemukwikwidzi wayo: Wayland.
Iyo Mir graphical server kubva zvino zvichienda mberi taura kana kutaurirana nemakomputa emakomputa uchishandisa Wayland. Kutaurirana uku hakuna kufanana neXMir kana XWayland, asi iprotocol yekutaurirana isingachinje chikuva asi kuti inotaura yakananga kukombuta neWayland.
Iyo nyowani vhezheni yeMIR ichave ichiwanikwa muUbuntu 17.10 uye ayo epamutemo zvinonaka, pamwe nekugovera izvo zvinovakirwa paUbuntu 17.10. Asi haizove default graphical server yekuparadzira, asi ichava imwe sarudzo mukati meUbuntu repositori. Kana isu tichida kuyedza iyi vhezheni vhezheni mushanduro pamberi peUbuntu 17.10, isu tinongofanirwa kuvhura terminal uye tinyore zvinotevera:
Izvi zvichaisa MIR pakombuta yedu yeUbuntu, asi inofanira kuve Ubuntu. Nehurombo, MIR ichiri kusashanda pane isiri-Ubuntu kana Ubuntu-based distros. Chinhu chinogona kuchinja kune inotevera vhezheni yeiyi graphical server Iwe haufunge kudaro?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » MIR inoenderera se graphical server
Ini ndiri kure nekuve nyanzvi yemifananidzo kana chirongwa, asi pane chinhu chimwe nezve MIR chandisingade uye icho ndechekuti yakarongedzwa muC ++. Iwo mutauro wakanaka kwazvo, pasina mubvunzo, asi kuisa mutauro wechinhu kuchirongwa padanho repasi hakuna kuratidzika kwandiri, kana kuita senge kwandiri, chinhu chakakodzera kuita.
Ubuntu inosiya iyo 32-bit chikuva
Intel Yakajeka Midziyo 3.0, inouya shanduko kune midziyo